P & Q ọkọlọtọ ngwaahịa
Weather Gosiri Light / Vandal-Gosiri Light
Weather Gosiri Light / Vandal-Gosiri Light ebughibu
My ebu na Platform Light
Industrial nnukwu isi
Die casting aluminom n'uko ìhè
Ikanam Street Light
ebu ebu m
Vandal àmà ìhè
Ihe mbu nke m
Die mgbatị bụ oru oma na echekwa n'ichepụta usoro. A na-eji ya emepụta akụkụ ọla dị mgbagwoju anya nke etolitere site na ebu ọzọ, akpọrọ dies. Ọnwụ ndị a n'ozuzu ha na-enye ndụ ogologo oge, ha nwekwara ike ịmepụta ihe ndị na-adọrọ mmasị.
The anwụ mgbatị usoro na-agụnye iji nke a ọkụ, wụrụ awụ ígwè, a na-anwụ mgbatị igwe na a na-anwụ na-omenala-mepụtara maka akụkụ a ga-achụpụ. The metal gbazee n'ime oku na mgbe ahụ na-anwụ mgbatị igwe agbara na metal n'ime anwụ.
P&Q enweghị plastic injection factory, ma nwekwara ike inye mpempe akwụkwọ metal akụkụ dị ka ndị ahịa chọrọ. P&Q plastic injection akụkụ, obere ka nnukwu size, tumadi na ọkụ na n'okporo ámá ngwa.
P&Q enweghị akwụkwọ mpempe akwụkwọ, ma nwee ike inye akụkụ mpempe akwụkwọ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Obere na nnukwu, ọkachasị na ọkụ na ngwa ụlọ n'okporo ámá.
Mgbakọ nke ngwaahịa ndị gwụchara na ngwaahịa ndị mechara
Factorylọ ọrụ mgbakọ P&Q nwere Haining, Zhejiang, China. Ọ dịghị ihe na-erughị 6000 m2.
Mmepụta a na arụ ọrụ na njikwa njikwa ISO9001. Ọfịs na ụlọ ọrụ mmepụta ihe jikwaa na usoro ERP kemgbe 2019.
Ikanam Street Light-PQSL003
Ike: 80W, 150W
2. CREE ibe> 100lm / w
4. Die casting aluminom 5. Ogologo oge:> 50,000hrs
Ọkwọ ụgbọala Meanwell
Die casting aluminum bulkhead ìhè
1. 9w, 12w, 18w, 24w. φ 295 × 83
2. Samsung 5630 ada> 95lm / w
4.die mgbatị aluminom + na-acha ọcha PC diffuser:
5.Ndị ndụ:> 50,000hrs
6.Arụ ọrụ dị: Sensor, Emergency
Ọ bụ IP65 anyị, IK10, nnukwu isi dị mma maka ọtụtụ ngwa ime na mpụga. A na-arụpụta ụlọ ebe a na China na-eji polycarbonate dị elu ma na-anwụ anwụ.
Bulkhead / EM Bulkhead ikanam Light
Akwa arụmọrụ, vasatail, retrofit dakọtara LED bulkhead light The Bulkhead bụ nnukwu arụmọrụ na ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ejiri nlezianya rụọ ọrụ na nzaghachi site na ndị na-arụ ọrụ ndozi ụlọ ọrụ iji hụ na nrụnye dị mfe nke ọkụ ọkụ na-enweghị atụ.
Easy echichi ● Universal ugwu imewe
IP IP dị elu na mmetụta mmetụta dị na smart EM model
Ihe mbu, nke kwesiri ntukwasi obi, ihe eji ebu ihe.
Ezubere Freelander iji nye ụzọ kachasị ike iji rụọ ọrụ nke na-enye ndị na-ebugharị ụlọ ọrụ na ndị na-aga ije ije, nwee ike ịnapụta ihe dịkarịa ala nke 30 lux yana nkezi nke 80 lux mgbe agbatịro dị 12m iche na ụdị nrụnye dị elu nke 2.7m na a 5-ogo tilt. Zụlite mmanya nke arụmọrụ na arụmọrụ maka onye na-ebu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọkụ na-aga ije.
Robdị ihe siri ike dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe iji dabara ọtụtụ nrụnye ụlọ ọrụ ọkọlọtọ spigot. Nhọrọ nke e mere na ìhè nke ụbọchị ga-eme ntụgharị na-akpaghị aka n'etiti usoro ehihie na abalị iji belata ike oriri. Ọzọkwa dị na Wildlife / Turtle Enyi na Enyi Amber.
Die mgbatị ahụ, Hummer ebughibu Ikanam PRO siri ike Ikanam weatherproof luminaire iji nagide corrosion ma ọ bụ vandal ewekarị gburugburu.
Ezubere ma gbakọtara Hummer na-eme ka ihu igwe na-ezighi ezi nwere akụkọ doro anya ma tụkwasị obi nke siri ike maka ọkwa niile nke ụlọ ọrụ na ebe ọha na eze gụnyere ụlọ ọrụ njem, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ dị arọ, na mpaghara mmebi iwu dị elu. E mezigharịla ihe njikwa ahụ ka ọ dịwanye mfe, rụọ ọrụ nke ọma, ma nwee ọtụtụ ihe na Lumen Select Technology,
Die casting body, Hummer LED PRORobust ikanam weatherproof luminaire iji nagide corrosion ma ọ bụ vandal ewekarị gburugburu.
Maka Teknụzụ ma ọ bụ mgbe erechara
address (Adreesị):Mba 11 Buildinglọ, Nke 8 Haining Avenue, HAINING, JIAXING, 314400 China
Igwe ọkụ P&Q